Ụdị oriọna atọ na-enye ìhè ụlọ iri nri gị | Bezzia
Ụdị oriọna atọ na-enye ìhè ụlọ iri nri gị
Maria onyekwere | 09/05/2022 20:00 | Aghụghọ mma
Ị maghị ka esi amụnye ọnụ ụlọ iri nri gị? Enwere ọtụtụ ụdị oriọna ị nwere ike iji nye ọkụ ozugbo na tebụl iri nri na n'ihi nke a ime mkpebi nwere ike ịdị oke egwu. Iji mee ka ọ dịrị gị mfe, na Bezzia anyị na-ekerịta gị taa ụdị oriọna atọ nke ị na-apụghị iji mebie.
Enwere ụdị oriọna atọ dị n'uko iji mee ka ọnụ ụlọ iri nri gị dịkwuo ọkụ nke ọ na-esiri ike ịghara ime ya nke ọma na ha niile na-ekerịta otu àgwà: ha bụ pendants. Ịhọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ ga-adabere n'ụdị ị na-achọ iji chọọ ebe ezinụlọ dị ka ụlọ iri nri.
Gịnị mere pendants? N'ihi na anyị na-achọ ime ka ìhè dịkwuo nso na tebụl ka ọ na-enwu. Ọ dị mkpa iche na n'ọtụtụ ụlọ ha ga-enwe ike kpọgidere dị ka ọ dị na foto anyị na-egosi gị. Ọtụtụ n'ime anyị enweghị ụlọ elu dị elu dị otú ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị mkpa ịkwanyere ebe dị anya site na tebụl gaa na oriọna ka ha ghara itinye aka dị ka o yiri anyị na ọ ga-eme na onyinyo nke atọ.
1 oriọna na ogwe aka
2 oriọna pendant sitere n'ike mmụọ nsọ
3 Nnukwu oriọna eke
oriọna na ogwe aka
La multi-ogwe aka oriọna Ha bụ ihe ọzọ dị mma iji mee ka ụlọ iri ihe ọkụ. Dị ka ọ na-adịkarị, ndị a na-eji axis dị n'etiti nke ogwe aka na-esi na ya pụọ ​​n'akụkụ dị iche iche nke mere na ọ dịghị akụkụ nke tebụl a na-ahapụ enweghị ọkụ.
Ha bụ oriọna ndị nwere ọtụtụ àgwà ma dị mma maka iji nweta ezigbo nchikota n'ime ụlọ iri nri n'etiti ọkụ n'ozuzu na ìhè ọkụ. Ndị ahụ na ogwe aka nka Ha ga-ahapụkwa gị ka ị na-amụnye arịa ụlọ ndị ọzọ dịka kọbọd.
Na Bezzia anyị na-ahụ na ha bụ ọmarịcha atụmatụ maka ime ụlọ iri ihe niile. Na ọ bụ ya nnukwu oriọna dị iche iche nke ụdị a na-eme ka o kwe omume ịmegharị ha na oghere dị iche iche. Ị ga-ahụ ha na ákwà ngebichi textile, dị mma maka ịgbakwunye omenala omenala na ụlọ iri nri; na tulips iko iji nye ya ụdị kpochapụ; ma ụdị balloon iji nweta ọnọdụ dị ugbu a na nke ọgbara ọhụrụ.
Nzọ na iko globe oriọna na-enwu n'ime ụlọ
oriọna pendant sitere n'ike mmụọ nsọ
Ebe ọ bụ na oriọna ndị a na-akwụnye n'ụdị ụlọ ọrụ nwetaghachiri aha ha n'ụwa a na-achọ mma, ha anọgidewo na-abụ ihe ọzọ magburu onwe ya maka ịgbanye ma agwaetiti kichin ma tebụl ụlọ iri ihe. Na oghere ndị a ekwesịghị inwe ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka ya.
Ọ bụ ezie na n'ihi nnukwu nha ha, ọ ga-ekwe omume iji naanị otu n'ime oriọna ndị a na-enwu n'ime ụlọ iri nri, a naghị ahụ ha naanị ya. Nke otu oriọna abụọ ma ọ bụ atọ Ha na-adịkarị na tebụl akụkụ anọ ma nweekwa ike ịchọ mma ka ukwuu.
A na-enyekarị oriọna ndị a ọla ma ọ bụ matte emecha. Nke ikpeazụ na agba ndị dị ka nwa, isi awọ ma ọ bụ nkume agba ugbu a bụ ndị kasị ewu ewu na-achọ mma ma rustic na nke oge a ụlọ iri nri.
Nnukwu oriọna eke
Ihe ndị sitere n'okike na-agbakwunye ọkụ n'ụlọ anyị mgbe niile. osisi emep uta eri Ha bụkwa ihe na-emekarị n'ime ime ime, yabụ gịnị kpatara na ị gaghị etinye ha na nhazi nke ụlọ iri nri? Anyị nwere ike ime ya site na oche, kamakwa site n'itinye nnukwu oriọna etiti na tebụl. Ị naghị eche na ha na-adị mma karịsịa na obere tebụl gburugburu ma ọ bụ akụkụ anọ?
Ọbụghị naanị na oriọna ndị a na-enye ọkụ na-ekpo ọkụ n'ime ụlọ mana ha na-egosipụtakwa ekele maka nhazi ha akpara akpa. ụkpụrụ mara mma na mgbidi . Uko ụlọ gị ọ dị elu? Dare na oriọna ụdị mgbịrịgba. Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, n'uko ụlọ adịghị elu karịsịa, na-ahọrọ ihe a na-agba gburugburu na nke dị larịị.
Ndị a bụ naanị atọ n'ime ọtụtụ ụdị oriọna ị nwere ike iji mee ka ọnụ ụlọ iri nri gị na-enwu. Enwere ike ịhazi ihe niile, na-ahọrọ nhazi ziri ezi, n'ime ụlọ iri nri gị mana naanị gị nwere ike ikpebi nke a ga-ahọrọ. N'ịtụle ọdịdị nke tebụl na nha ya, yana ụdị ụlọ ahụ, anyị ji n'aka na ị ga-ama. họrọ nke ziri ezi. Nke mbụ, kedụ nke na-amasị gị karịa? Kedu nke ị ga-achọ iji chọọ ụlọ iri nri gị mma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Aghụghọ mma » Ụdị oriọna atọ na-enye ìhè ụlọ iri nri gị
Onwere ndi nwoke ndi ibe ha na-akpagbu?
Gastroesophageal reflux, ụdị nri ị kwesịrị izere